Sida loo helo dib-u-habayn khaas ah oo ka socda goobaha TOP ee Google?
Backlinks aad ayey muhiim ugu tahay ilo kasta oo webka ah haddii ay tahay shabakadda ganacsiga maxaliga ah ama shirkadda internetka ee tafaariiqda weyn. Waxaad ka heli kartaa xiriirada dibadda iyada oo loo marayo faallooyin ku saabsan shabakadaha kale ee la xidhiidha websaydhka ama isticmaalka barta blogka ama soo gudbinta maqaallo ku saabsan bogga bulshada iyo cinwaannada bulshada. Waxaa jira siyaabaha ugu muhiimsan ee xiriirinta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira siyaabo badan oo xirfado kale oo xirfad leh oo lagu dhisi karo isku xirka shabakadda.
Maxaad u baahan tahay inaad isticmaasho goobaha TOP-da ee dhabarka?
Si aad u hesho PageRank sare oo kordhiya darajooyinkaaga bogga, waxaad u baahan tahay inaad dhisatid xiriiriyeada bogagga TOP PR. Milkiilaha bogga kasta wuxuu jeclaan lahaa inuu helo xiriirka ilaha websaydhka sareeya, taasina waa sababta aad u badan tahay inaad la kulmi doonto dhibaatooyin helitaanka goobahan. Intaa waxaa dheer, inta badan, bogagga noocan oo kale ah waxay u oggolaan karaan oo kaliya bogagga ay ku xiran yihiin. Nofollow links ma keenayso juice isku xira goobtaada haddii ay kuxiraan bogagga internetka ee raasumaalka ama spamka. Taasi waa sababta aad u baahan tahay waa isku xiryo xiriiriya oo kor u qaadi kara darajadaada boggaaga iyo inaad ku darsato dadaalka aad udheeraha raadinta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah website-yada TOP-ta ee halkaas oo laga heli karo backlinks. Aan ka hadalno qaar ka mid ah ilaha webkani. Google+ waa hogaaminta shabakadda warbaahinta bulshada oo lagu meeleeyo TOP of PageRank oo leh calaamad ugu sareeysa
Dhismahan, waxaad ku dhisi kartaa labadaba nofollow iyo dib u celi.
Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad gasho xisaabta Google+ oo aad u xaqiijiso. Hubi inaad haysato sanduuqa boostada ee Gmail. Kadib waxaad tagtaa boggaaga bogga oo guji qaybta "Ku saabsan". Ka dib markaad u rogto "Links" oo guji "Isticmaal" doorasho. Waxaad ku dari kartaa isku xirnaantaada qaybtan, waxayna si toos ah u noqon doonaan kuwo si toos ah.
Mashruucan warbaahinta waa isbeddel waqtigayaga. Maalin kasta malaayiin qof ayaa u furan ujeedooyin waxbarasho iyo madadaalo. Taasi waa sababta ay macquul tahay in la isticmaalo ilaha webka PR9 ee faa'iidadaada. Halkan waxaad ku dari kartaa labada isku xiran oo isku xiran.
Sida YouTube waa barnaamij warbaahineed oo leh xaddidan oo xadidan macluumaadka qoraalka ah, waxaad ku dari kartaa boggaaga boggaaga ama bogga boggaaga "Ku saabsan" ama "Qeex". Xidhiidhyadani waxaa loo tixgeliyaa nofollow sidaa daraadeed ha u keenin juice toos ah goobtaada. Si kastaba ha noqotee, haddii aad isku xirto bogga "Associated Website", markaa waxaad haysataa fursado aad ku heli kartid tayo fiican.
Maadaama ay jiraan dad badan oo fiidiyow ah oo fiidiyoow ah kuwaas oo si joogto ah u soo dhejinaya fiidiyowyadooda YouTube, waxaad ku dhisi kartaa xiriir ganacsi leh. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad heshaa blogger oo abuuraya fiidiyo ama mawduuc la xidhiidha adigaaga oo aad waydiisatid iskaashi. Waxay u badan tahay in aad hesho jawaab togan sida bartayaal badan ayaa raadinaya taageero dhaqaale.
Si aad u heshid dib u daaweynta YouTube, waa inaad xaqiijisaa koontadaada adigoo isticmaalaya iskuxirta una gudbiso bogga Google Webmaster. Markaa waxaad u baahan tahay inaad gasho xisaabtaada kumbuyuutarka oo aad dooratid "Channel Channel" oo ugu danbeyn guji "aragti dheeraad ah. "Marka la eego qaybta sare, waxaad awoodi doontaa inaad ku darto boggaaga" qaybta internetka ee la xidhiidha " Source .